Qarax ka dhacay hoyga wasiirka xanaanada xoolaha ee Somaliland & baaritaano ka socda xaafada Shacabka ee magaalada Hargeysa. – Radio Daljir
Qarax ka dhacay hoyga wasiirka xanaanada xoolaha ee Somaliland & baaritaano ka socda xaafada Shacabka ee magaalada Hargeysa.
Hargeysa, Sept 17 – Qarax ayaa caawa fiidkii ka dhacay hoyga wasiirka xanaanada xoolaha ee Somaliland Axmed Xaashi ‘Oday’ oo ku yaal xaafada Shacabka ee magaalada Hargeysa, wax yarna u jira hoyga M/weyne Siilaanyo.
Qaraxa ayaa la sheegay in uu ahaa mid aad u xoogan, lagana maqlay nawaaxiga Miiska Saraakiisha ee Shacabka Hargeysa.
Lama sheegin wax khasaare noole ah oo ka dhashay qaraxa, walow guriga uu soo gaaray burbur xoogani.
Cidina weli ma aanay sheegan, waxaase la tuhmayaa in ay ka dambeeyaan ashkhaas gacansaar la leh kooxa-diimeedka ka dagaalama koonfurta Somaliya ee Al-shabaab.
Ciidanka amniga ee magaalada Hargeysa ayaa wax yar ka dib gaarey halka qaraxu ka dhacay, bilaabayna baaritaano la xiriira qaraxa iyo ciddii ka dambaysay.
Dhinaca kale, mudaaharaado rabshadho wata ayaa maanta gelinkii hore ka dhacay magaalada Boorame ee gobolka Awdal.
Waxaa loo aaneeyey rabshaddu in ay ka dhalatay 4 darawal oo ay xireen bilaysku, laguna eedeeyey in ay gacan siiyeen dhawr boqol oo ciidan hubaysan ah oo ka tirsan jabhada ONLF oo ka soo degay Saylac, una tallaabay gobollada Somali galbeed.
Xariga 4-ta maxbuus ayaa ku soo beegmay saraakiil Itoobiyaan ah oo maalmahan ku sugnaa magaalada Boorame, loogana shakiyey in ay lahaayeen amarka lagu xiray 4-ta maxbuus; dadka mudaaharaadka dhigay ayaa diidan in maxaabiista loo gacan geliyo saraakiisha Itoobiyaanka ah.
Magaalada ayaa caawa deggan, walow uu jiro dhaqdhaqaan ciidan oo ka socda gobolka Awdal.